The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: Xarardheere
Xarardheere waa degmo ku taala deexda gobolka Mudug.Xarardheere waa degmo xeebeed oo ku taalo gobolka Mudug ee woqooyiga Soomaaliya, waxey ku taalaa dhinaca qorax ka soo bax ee bari.Degmadaan waxaad ka heli kartaa waxyaabo farabadan, waana degmo dalxiiseed oo qaboow, waa degmada maanta ugu wanaagsan xaga nolosha ee degmooyinka Soomaaliya. Siyaasad ahaan waa degmo ka nabadgashay dagaalada galaaftay dalka qaybihiisa badan. Degmadan waxaa degan qabiilka
[Wax ka bedel] taariikhda degmada
Degmadan inta aynu ka heyno taariikhdeedu aad bey u farabadan tahay usaale waxaa lasameeyey maamulkii ugu horeeyey 1896. Waqtigaasi illaa 1931 waxaa gudtdoomiye ka,ahaa.
1.Diini Siyaad (Saruur)Iyo Shiiqaal
2.Gacal Kuul Sebriye (Saruur) 1896-31.
3.Maxamuud Dhabaneey (Saruur)
Sidaa ayey isaga dambeeyeen sidaanu taariikhda ku heyno. Wxaa kale oo jiray caaqilo kale oo badan oo soo maray degmada taariikhdan iyo magacyadan intaba waxaan kasoo diyaarinnay. Buugga: please websteku ha.ilaalsho anshaxa iyo sharafta qaba,ilada soomaalida oo magacyada qaldan looga qoray waxaan kaxumahay beesha ugu badan beelaha dagan miyiga iyo magaalaba in marna marti kanoqotay magaalada marna magaceeda looqoray si qaldan beesha ;( ahmed faarah) qubeys ; waa beel inta taariikhda kuqorn ilaa 775 sano daganayd xarardheer waxayna kamid tahay beelaha ugu badan deegaan ahaan dhinca deexda waxay ubdan yihiin xoola dhaqato sida adhiga iyo loda sido kale waa kaluumaysato waxay leeyihiin nabadoono iyo ugaasyo siyaasi yiin aana halkaan lagu soo koobi karin tusaalu ahaan sida nabadoo (xasan wehelye rooble ') (: xasan mataan:: oo ilaa 1930 1960ki nabadoon ka. Ahaa dadka isku yiraa reer banaan oo dhan iyo kuwakake o farabadan marka walaalayaal magaca badal plz change jaaji to change)_) ahmd faarax) ( qubeys) by abshir gunid: waana buug wax badan kaqoray habkii ay isu xakumi jireen soomaalidu qarniyadii dhexe.
Degmadaan oo ah meel Ilaahey ku manneystay qeyraadka sida baddii, xoolihii, beerihii intaba. Waxaa kale oo degmada ku teedsan tuulooyin dhowr ah sida. Dhalwo, Dumaaye, Miliqo, Dabagalo, degmada Jowle, Burjirriqo, Gaan, Keynaan, Caad, Cagacadde, Ilbir, Bur-sebriye,iyo Deegaano kale oo badan.
Haddii aannu dib u jalleecno waxaa ku dhashay Xarardheere Rag caan ka dhex ah bulshada soomaaliyeed iyo siyaasiyiin caan ah sida: Cabdirashiid Cali Sharmaarke, madaxweynii hore ee Soomaaliya (1967-69). (Jeneral Salad Gabayre Kediye),Wasiirkii Gashaandhiga ee dowladii kacaanka, kana mid ahaa aasasayaashii golaha sare ee kacaanka. Maxamed Siciid (Jentelmaan)]], xildhibaan ka ahaa barlamaankii (1954-69). C/Raxmaan Xaashi Xassan wasiirka ku xigeenka diinta & Awqaafta Dowladii TNG 2000-2004 Ahne Hada Ambassador Ka Algeria u Fadhiya Dowlada KMG ee Soomliya. Nageeye Gacal Kuul(Garxiir) halyey aad looga yaqaan deegaanka ahaana korneyl 1958-69. Kulan xassan Jurun (jurun) abwaanka da'da yaraay oo aad looga yaqaanay dhamaan gobalada dhexe Tiriyay neh Gobayo aad u faradan. Walaal sida aynu ku hellay buuggan ka sheekeynaya taariikhda Xarardheere dhib ayeynu ka marnay markaa fadlan waxba haka bedelin qoraalkan adigoo mahadsan haddii aad u baahantahay wax intaa dheer laxiriir matxafka taariikhda geeska africa gaar ahaan soomalida ee Roma itely.